Askarta Deyniile oo la siiyay 3,000 oo Buug Gacmeed ah - Latest News Updates
Askarta Deyniile oo la siiyay 3,000 oo Buug Gacmeed ah
AMISOM ayaa Saraakiisha Boliiska Soomaaliyeed ee Gobolka Banaadir ku wareejisay Saldhigga Boliiska Deyniile oo dib dayactir ballaaran ay ku samaysay Dowladda Jaban oo kaashanaysa waaxda arrimaha Bulshada ee Ciidanka Midowga Afrika.
Taliyaha Ciidanka Boliiska AMISOM,Mss, Christine Alalo oo munaasabaddii lagu wareejinayay Saldhiggan ka hadashay ayaa sheegtay in ay Soomaaliya ka caawinayaan tayaynta kaabayaasha iyo dhismaha awoodda Ciidanka.
Christine Alalo , ayaa sidoo kale sheegtay inay AMISOM ka go’an tahay inay tababarto oo ay qalabeyso Cidamada Boliiska, si ay u helaan xirfado lagama maarmaanka u ah,in ay daboolaan baahiyaha ka jira Dalka oo dhan.
Saldhiggan dib u dayactirka lagu sameeyay, ayaa sidoo kale lagu soo kordhiyay qaybo cusub, waxaana lagu xiray Nalalka ku shaqeeya Cad-ceedda, iyadoo Ciidankana loo qaybiyay 3,000 oo Buug Gacmeed ah, si ay ugu adeegsadaan diiwaan gelinta dhacdooyinka, sida ay sheegtay Mss, Alalo.
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Ms, Zakiya Xuseen, ayaa ugu mahad celisay AMISOM dadaalkii udub dhexaadka u ahaa howshan ee ay ku bixisay dib u dayactirka Saldhiggan, iyo caawinta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.